रञ्जना मैनालीको घ’टनामा खुल्यो अर्को रहस्य ! कसरी भयो ५० लाख स्वहा ? (भिडियो हेर्नुहोस) – " कञ्चनजंगा News "
रञ्जना मैनालीको घ’टनामा खुल्यो अर्को रहस्य ! कसरी भयो ५० लाख स्वहा ? (भिडियो हेर्नुहोस)
No Comments on रञ्जना मैनालीको घ’टनामा खुल्यो अर्को रहस्य ! कसरी भयो ५० लाख स्वहा ? (भिडियो हेर्नुहोस)
रञ्जना मैनालीको ३ वर्षअघि माघ महिनामा अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा थिइन् । कागजात बनाउने काम सकिएको थियो । त्यहीँ समयमा घरमा विवाहको कुरा चल्यो, उनी विवाह गर्न राजी भइन्। आमा सिर्जना मैनालीले राम्रै केटा पाइएको बताएपछि चितवनको राप्ती नगरपालिकाका २७ वर्षीय रविकान्त रुवालीसँग विवाह हुने पक्का भयोे।
अस्ट्रेलिया पुगेपछि रञ्जना र रविकान्तबीच राम्रै कुराकानी भइरहन्थ्यो । पतिपत्नीबीच कुराकानीको क्रम ६ महिनासम्म राम्रैसँग चल्यो । त्यसपछि कुराकानी पातलिँदै गयो । रञ्जनाले रवीकान्तलाई आफू कलेजमा व्यस्त हुने भएकाले कुराकानी गर्न समय नमिल्ने गरेको बताउन थालिन् । चितवन घटनाको सत्य तथ्य, ५० लाख स्वाहा कसरी भयो ?
← ‘पुरस्कार भारी भइसक्यो, अब कसैले नदिनू’ → शिल्पालाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै छविराज ओझाले लेखे यस्तो